Ithegi: covid-19 | Martech Zone
Enye yezinto ezimbalwa zokufakwa kwesilivere kwintlekele ye-COVID-19 yeenkampani ibe kukukhawulezisa okuyimfuneko kotshintsho lwedijithali, olufunyenwe ngo-2020 ngama-65% eenkampani ngokweGartner. Ibikukuqhubela phambili ngokukhawuleza kuba amashishini kwihlabathi liphela ayiphawule indlela abasebenza ngayo. Njengobhubhane olugcine abantu abaninzi banqanda ukujongana ubuso ngobuso ezivenkileni naseziofisini, imibutho yazo zonke iintlobo ibiphendula abathengi ngeenkonzo ezilula zedijithali. Umzekelo, iivenkile ezinkulu kunye neenkampani zeB2B
NgoLwesibini, Januwari 19, 2021 NgoLwesibini, Januwari 19, 2021 UNate Burke
Amashishini ahlala ejonge iindlela zokuphucula ukusebenza kunye nokusebenza kwemisebenzi yabo. Kwaye oku kuya kuba kukugxila okubaluleke ngakumbi njengoko siqhubeka nokuhamba ngendlela entsonkothileyo kunye nokuguquguquka kwemozulu yorhwebo ye-COVID. Ngethamsanqa, i-ecommerce iyachuma. Ngokungafaniyo nokuthengisa okwenziweyo, okuthe kwanefuthe elibonakalayo kuthintelo lobhubhane, ukuthengisa kwi-Intanethi kunyukile. Ngexesha leholide ka-2020, eliyeyona xesha lixakekileyo lokuthenga ngonyaka, ukuthengiswa kwe-Intanethi kwi-UK kuye kwenyuka